Arzantina: Ny fitrohana hira sy ny fanodikodinam-baovao · Global Voices teny Malagasy
Arzantina: Ny fitrohana hira sy ny fanodikodinam-baovao
Voadika ny 04 Jolay 2018 3:55 GMT
(Marihina fa tamin'ny 25 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nampahafantatra tamin'ireo mpamaky ny gazety tao Arzantina fa nanao fifanarahana tamin'i CAPIF, ilay orinasa misolo tena ireo orinasan'ny famokarana hira ao Arzantina ireo mpisera aterineto sasany mba handoa vola ho onitr'ireo hira nalain'izy ireo tsy ara-dalàna tao amin'ny aterineto. Asehon'izany tati-baovao izany ny fahasamihafana mazava nisy teo amin'ny sehatra fampahalalam-baovao sy ny fiantraikan'ny tombontsoa ara-barotra teo amin'ny fitateram-baovao.
Tranga iray mahaliana ny gazety Infobae . Io vondrona io ihany izay tantanan'i Daniel Hadad, no tompon'ny 10Musica, tranonkala iray fitrohana hira. Mazava ho azy fa izy ireo no nanokana ny sehatra betsaka indrindra ho an'ilay lohahevitra. Saingy araka ny voalazan'i Zona Indie , nampahafantatra tamin'ny fomba “tsy voafaritra” (andeha ho ampiasaina izany teny izany mba ho tsara fanahy kokoa) ny gazety. Ohatra, niteny izy ireo fa “nanameloka ny mpisera ny fitsarana arzantiniana“, raha ny marina anefa dia ny andiana fifanarahana ivelan'ny lalàna no nisy. Tao amin'ny Denken Uber, namakafaka ilay olana momba ny fanodikodinam-baovao i Mariano Amartino .
Ao amin'ny Señales de Humo , nanadihady ny olana maro momba ny firesahana ilay lohahevitra i Patricio Cañete. Hotanisaiko ireo zava-misy telo tena mahaliana izay nomarihiny:
-There's no concrete reference to the infractors, no names or last names, nor information about the companies. It doesn't state how many got fined, where they were located (Buenos Aires, other important cities, etc.), how they were identified, etc.
- Tsy misy firesahana momba ireo mpandika lalana, tsy misy fanampin'anarana na anarana, na vaovao momba ny orinasa. Tsy milaza hoe firy no nandoa lamandy, aiza no misy azy ireo (Buenos Aires, tanàndehibe hafa, sns.), ny fomba namantarana azy ireo, sns.
-Tsy milaza hoe iza ny manampahefana nampihatra ny lamandy: sampan-draharaha ve sa fitsarana, fitsarana ao an-toerana sa any amin'ny faritany, sa nasionaly , sns.
-Tsy nilaza firy momba ny dingana izay efa nampiharina tamin'ny lamandy mifandraika amin'izany, inona ny lalàna, ny fanapahan-kevitra na ny dingana voalaza ao amin'ny sazy araka izany.
Misy ihany koa ny hevitra momba ity lohahevitra ity tao amin'ny Diario de un viaje a Misiones [ES], Blog de Efra [ES], Juan en los medios [ES], Los Bits [ES] (izay manolotra ny Google Bombing mampifandray ny teny hoe “delincuentes “-maditra- amin'ny tranonkalan'ny CAPIF) sy Nivel 13 [ES] .
Mazava ho azy fa tsy ny hampahafantatra, fa ny hampitahotra ny mpisera no tanjon'ny fampahalalam-baovao sasantsasany ary hampitsahatra azy ireo amin'ny fitrohana hira. Amin'izany dia mampiroborobo ny raharaham-barotra amin'ny “fitrohana ara-dalàna ny hira” izy ireo, ary mikasa ny hivarotra hira izay azontsika henoina fotsiny – noho ny fitantanana ny “zo nomerika” – amin'ny fitaovana sasany. Mila miatrika ny zava-misy isika fa voafaritry ny tolotra sy tinady ny vidin-javatra. Ary tsy mino ny olona maro any Arzantina fa mitentina 35 pesos (eo amin'ny 12 dolara amerikana eo) na mihoatra ny rakikira iray. Tsy misy zavatra betsaka loatra azon'izy ireo atao amin'izany. Nahoana izy ireo no tsy manandrana ny modelin'ny raharaham-barotra vaovao sy navaozina fa tsy manameloka ny mpanjifany manokana?